Kutama Panguva Yakaoma—Takateerera Tikapona | Blasius da Gomes
AKABEREKWA MUNA 1963
AKABHABHATIDZWA MUNA 1995
NHOROONDO YOUPENYU Mukuru aifudza makwai aJehovha nerudo panguva yairwisana zvitendero muAmbon, chimwe chezvitsuwa zveMaluku.
VAKRISTU nemaMuslim vakanga vava nenguva vachivengana. Ruvengo urwu rwakaramba rwuchikura zvokuti musi wa19 January 1999, vakatanga kurwisana vari makiromita anenge matatu kubva pamba pedu. Zvinhu zvakanga zvakaita manyama amire nerongo. *
Pashure pekunge ndaona kuti mhuri yangu yakachengeteka, ndakafonera vamwe vaparidzi kuti ndinzwe kuti vari sei. Ndakavakurudzira kuramba vakadzikama uye kuti vasaenda munzvimbo dzine ngozi. Pava paya, vakuru vakashanyira makwai vachiasimbisa uye vachiakurudzira kuti aungane achinamata ari mumapoka maduku.
Hofisi yebazi yakatikurudzira kuti titamise vaparidzi vese vaigara munzvimbo dzairwiwa, uye takasvitsa mashoko iwayo kumhuri dzakawanda. Imwe hama yakaramba kutama, uye yakazourayiwa nemhomho yaiva nezvombo. Asi munhu wese akateerera zvakataurwa nehofisi yebazi, akapona.
^ ndima 1 Kurwisana kwacho kwakakura kukapararira mupurovhinzi yese yeMaluku kwemakore anopfuura maviri uye zviuru nezviuru zvevanhu zvakatiza misha yazvo.